Ityala lesicelo-Weibo Electronic Co, Ltd.
Isenzi se-AC sangoku
DC woluvo yangoku
Isivamvo seVoltage ye-AC
Inzwa yeVoltage yeDC
Iziphumo zeHolo woluvo lwangoku
Vula Isiphumo seHolo yoHolo lwangoku
Isandi esivaliweyo seHolo yoKhenketho ngoku
Uvavanyo lweMpawu zoMqondiso
Ityala lesicelo-Icandelo loNxibelelwano
I-Weibo Elektroniki iphuhlise imodyuli yokujonga esinezigaba ezithathu yamandla, imitha yamandla kaloliwe ojikelezayo kunye nokuvuza kwenzwa yangoku yokujonga amandla kwezixhobo zokubeka iliso kwigumbi lezixhobo, ukubeka esweni izixhobo zomoya, ukhuseleko lwamandla oonxibelelwano, ukubeka iliso kwibhetri kunye neenkqubo zolawulo . Uthotho lwezixhobo ezizimeleyo zokuzivavanya zodwa, ezinje ngeehenjisi zempembelelo yeholo, ii-AC transmitter sensors kunye neebhetri zangaphakathi zokumelana neenzwa, ziyilelwe ukuthembeka okuphezulu, ukuchaneka okuphezulu, ukwahlula okuphezulu, impendulo ebanzi yokuhamba rhoqo kunye nobubanzi beqondo lobushushu ngokubanzi ngokukhuthazwa ngokukodwa kwe-EMC kunye nokukhuselwa ngombane. Ukusetyenziswa kwamandla asezantsi kunye nezinye izinto ziqinisekisa ukusebenza ngokuthembekileyo kwenkqubo yonxibelelwano.
Isicelo seshishini lonxibelelwano
Inkqubo yokujonga indawo ekude Power
Isiseko sesiseko segumbi lekhompyuter inkqubo yokujonga ukusetyenziswa kwamandla
Unxibelelwano lwamandla, iUPS
Inkqubo yolawulo lokujonga ibhetri
Ngophuhliso olukhawulezileyo lwamanzi olondolozo lwamanzi eTshayina kunye nombane ohambisa umbane ngombane, ngakumbi ukuphunyezwa kweProjekthi yokuHanjiswa kwaManzi eSouth-to-North Water, iimfuno "zokujonga ngokuzenzekelayo abantu abangajongwanga, bambalwa abantu abasemsebenzini" kunye nokubeka esweni ukhuseleko lwamaziko olondolozo lwamanzi nako iyanda.
Ukubeka esweni ukuphakamisa yemveli isebenzisa isivamvo xi umthwalo ukulinganisa ngqo tsala / uxinzelelo ukuqonda ukhuseleko nangakumbi umthwalo weemoto. Le ndlela ayinzima nje ukuyifaka nokuyigcina, kodwa okona kubaluleke kakhulu, eyona nto iphambili kolu hlobo lwenzwa-uxinzelelo Izinto ezinobuthathaka zichaphazeleka kakhulu kukuphazamiseka kwendalo njengokuhamba okubangelwa bubushushu bangaphandle, umonakalo obangelwe kukungcangcazela, kunye nokuguga umaleko wokuncamathela obangelwa lixesha elide lokusebenzisa. Ukongeza, ngenxa yokuba uluhlu lwamandla alinganiswe sisixhobo sesicelo sibanzi kakhulu, ukuchaneka kwendlela yokulinganisa amandla asezantsi kuphantsi, kwaye kunzima ukuhlangabezana neemfuno zesicelo.
Ityala lesicelo-Inkqubo yokuBek 'esweni eyiNtloko yeYunithi yokuPompa kakuhle
Ngophuhliso lwetekhnoloji yolawulo lweshishini, inkqubo ye-telemetry yokulawula kude ngaphandle kwamacingo ikwasetyenziswa ngokubanzi kwimithombo yeoyile yasekhaya. Izinzwa eziphambili zichazwe ngokufutshane apha ngezantsi:
1. Impompo yeyunithi yokujonga amandla kakuhle (amandla esigaba sesithathu kunye negalelo langoku, ukuphuma kwe-RS485)
Indibaniselwano yokwahlula ipharamitha inzwa ekrelekrele eyilelwe ngokukodwa ukumpompa imithombo yokutshintsha izixhobo ze-analog. Umqondiso wokubhaqa yi-AC 3-phase voltage kunye ne-3-phase current; Umxholo wokuveliswa yi-3 ombane (ixabiso elisebenzayo), i-3 yangoku (ixabiso elisebenzayo), amandla asebenzayo, amandla asebenzayo, amandla ombane, amandla asebenzayo, kunye namandla asebenzayo kunye nedatha yokuhamba rhoqo. Iziphumo zinokufumana ixabiso elisezantsi lenombolo efunekayo yombane kwiparameter yonxibelelwano, kwaye ayifuni ukuba i-RTU yenze isampulu ye-AC.
Isinxibelelanisi somthwalo esizinikezelweyo esisi-2 (uluhlu: 0 ~ 150kN; ubuntununtunu bemveliso: 1mVV)
Emva kweminyaka elishumi isetyenzisiwe kwindawo yokuvelisa ioyile, ihlala iphuculwa; Ukutywinwa ngokupheleleyo kunye nokuyila okungamanzi ukuhlangabezana nokusetyenziswa kwemozulu yonke; iiplagi ezilungiselelwe ukuthembeka okuphuculweyo; ukusebenza ngokulula nangokukhuselekileyo; Iziphumo ezingaguquguqukiyo kunye notshintsho olupheleleyo.
Isivamvo 3.Pressure (uluhlu: ukusuka 0 ~ 10Kpa ukuya 0 ~ 500Mpa, imveliso: standard wire-ezimbini inkqubo)
Le mveliso isebenzisa icandelo lokuzalisa elizaliswe nge-oyile elingenisiweyo okanye umzimba wonke ongenasinxi ongenakunqanda ukudibanisa inkqubo yokudibanisa i-state-state kunye ne-teknoloji ye-diaphragm yodwa. I-chip yokusasazeka yesilic efakwe kwisilinda esine-oyile ye-silicone, ngokusebenzisa i-diaphragm yentsimbi engenasici kunye ne-casing yangaphandle iyayihlukanisa ukusuka kwindawo yokulinganisa. Imveliso inokusebenza kwimeko ezibi.
Isilumko sokufuduka esijikelezileyo (uluhlu: 0 ~ 100, 0 ~ 180, 0 ~ 270, 0 ~ 340 [eqhubekayo] ukuphuma 0-5V)
Le mveliso inzwa yokulinganisa indawo ejikelezayo yento enobudlelwane obumiselweyo phakathi kokukhutshelwa kombane kunye ne-shaft rotation angle. Ibonakaliswa ngokuchaneka okuphezulu, ubomi obude, ukuhambisa okugudileyo okuhle njalo njalo.
5.Isivamvo sobushushu (kwintloko yobushushu bekhanda PT1000)
Ithunyelwe ngaphandle PT1000 iphakheji; uxinzelelo static uxinzelelo mkhulu kune 30Mpa; ixesha lokuphendula ngobushushu liyakhawuleza; imo yomenzi woluvo inokumiselwa ngokweemfuno zomsebenzisi; ubushushu obusebenzayo: -50 ° C ~ +400 ° C, inqanaba lokuchaneka A.
6.Ukulawulwa kabini kwe-infrared (ezintathu zokujonga inzwa yealam)
Ukusebenza okuphezulu kweefestile ezimbini-zeetekhnoloji enezobuchwephesha obuphezulu kwicandelo lokhuseleko lanamhlanje liqukethe i-master-slave-group-high-precision infrared detection device kunye ne-anti-glare circuit kunye ne-digital logic.
Hayi 98 Youxian East Road, Youxian District, Mianyang 621000, China